ड्र्याकुलाको हेन्चमान 'रेनफिल्ड' युनिभर्सल पिक्चर्समा अर्को छ - आईहोरर
घर हरर मनोरन्जन समाचार ड्र्याकुलाको हेन्चमान 'रेनफिल्ड' युनिभर्सल पिक्चर्समा माथि छ
युनिभर्सलको विस्तारित संसार अझै आकार लिईरहेको छ। अदृश्य मानिस यसको माग गर्न बक्स अफिसमा पर्याप्त ठाउँ डराउन सफल भयो। हाल, त्यहाँ छ वुल्फम्यान यस श्राप र अब ड्रेकुलाको हेन्चमन भित्र काम गरिरहेका रायन गोसलिंगसँग काम गर्ने फिल्म, रेनफिल्ड मैदानमा मिल्छ।
निर्देशक, क्रिस म्याके युनिभर्सल पिक्चर्समा सवार छन् रेनफिल्ड रबर्ट किर्कम्यान द्वारा रेखांकित र र्यान रिडली द्वारा लिखित। कथा पक्कै पनि, सबै भ्याम्पायरको बुबाको पागल सहायकमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यसले हामीलाई ड्रक्रुला आफैलाई चिन्नको लागि एक चरणको नजिक राख्छ, जसको म कल्पना गर्दछु त्यहाँ कुनै समय पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँ प्रसिद्ध चित्रण गरिएको छ रेनफिल्ड उमेर भन्दा बढी। मेरो व्यक्तिगत मनपर्नेहरू मध्ये एक टम फ्रान्सिस फोर्ड कोपोलाको प्रतीक्षामा रहेको छ ड्रेकुला। त्यसोभए, म पक्का छु कि केहि अभिनेताले लिनका निम्ति यो ठूलो उपक्रम हुनेछ। रेनफिल्ड पागल हरामी थियो जो दर्शन र भोकोको कारण संस्थागत भएको थियो जुन उसको मालिकले उसलाई दियो। त्यो बिडिंग रेनफिल्ड कुनै पनि व्यक्तिलाई टाउकोबाट पूर्णरुपले बाहिर निकाल्ने कष्ट सहनुपर्‍यो।
कथाको वरिपरि यस पटक परिवर्तनको लागि समकालीन हो भनिन्छ।
रिडलेको लिखित स्क्रिप्ट स्काइबाउन्ड मनोरन्जनको फिल्म टोलीले निर्माण गर्नेछ, जसमा किर्कम्यान, डेभिड अल्पर्ट, ब्रायन फुर्स्ट र सीन फुर्स्ट छन्।
तपाइँ साथीहरू आधारित फिल्मको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? रेनफिल्ड विशेष रूपमा? हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा थाहा दिनुहोस्।
साइको गोरम्यान अब ब्लू रे र डीभीडीमा छन् र हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईले यसको स्वामित्व पाउनु पर्छ। यहाँ जाँच गर्नुहोस्।
ड्रेकुलारेनफिल्डरोबर्ट किर्कम्यानरायन रिडलीयो वुल्फम्यानविश्वव्यापी तस्वीर